About: Jeremiah Matibiri
Jeremiah Matibiri (born 31 May 1971) is a Zimbabwean cricket umpire. He first umpired in first-class cricket in 2005, and in 2011 was involved in international cricket for the first time, umpiring a Twenty20 International between Zimbabwe and Pakistan.
Jeremiah Matibiri (born 31 May 1971) is a Zimbabwean cricket umpire. He first umpired in first-class cricket in 2005, and in 2011 was involved in international cricket for the first time, umpiring a Twenty20 International between Zimbabwe and Pakistan. (en)
Zimbabwean cricket umpire (en)
Jeremiah Matibiri (en)
Tichaona Jeremiah Matibiri (en)